Grammarly dia rindrambaiko fitendry tonga lafatra hianaranao anglisy | Androidsis
Tianay izany Grammarly dia tamin'ny Espaniôla, fa amin'izao fotoana izao dia amin'ny teny anglisy ary noho izany, nanjary fitaovana manokana kokoa ho an'ireo rehetra mianatra ilay fiteny na te hampanan-karena ny haavony.
Sarotra amintsika ny mieritreritra ny hiova izany SwiftKey na Gboard amin'ny rindrambaiko fitendry hafa amin'ny finday. Efa nanandrana zavatra betsaka isika ary miverina aminy foana, fa ny traikefa omen'i Grammarly dia mampiavaka azy, ka ho an'ny mpampiasa sasany dia mety ho izy io tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra voalaza.
1 Fanavaozana ny atao hoe gerund
2 Ahoana ny fomba hampiasana ny «Synonyms» amin'ny fitsipi-pitenenana
3 Ny antony lehibe Grammarly
Fanavaozana ny atao hoe gerund
Nohavaozina ny fitsipi-pitenenana Gramarly mba hitondra fiasa iray izay azo antoka fa tena manaitra. Rehefa manoratra amin'ny findainao ianao, ny app dia hanolotra sosokevitra mitovy hevitra amin'ireo teny nosoratanao. Izany no raha te hiala amin'izany «Mahagaga» ianao Ary miaraka amin'ilay iray izay efa leo anao amin'ireo vondrona chat ireo ianao, i Grammarly dia hikarakara ny tolo-kevitra synonyme vitsivitsy izay ho mora ampiasaina mba hampanan-karena ny voambolanao.
Izany hoe na ny Grammarly aza dia hanoro teny mitovy amin'izany ahoana no fanoratanao mandeha ho azy Mba tsy hiditra amin'ny ezaka mitady teny hafa izay tsy naverinao imbetsaka tao amin'ilay fehezanteny mitovy. Mandrosoa, tsara fotsiny izany!
Ny fiasa dia hiseho rehefa avy nanoratra teny iray ary niato kely. Tsy toa ny valin'ny mailaka vaovao an'ny Gmail, izay saika manova tanteraka ny teny mba hahafahanao mamaly haingana. Eto ianao dia mety ho ilay mifehy izay voasoratra ary raha mety aminao ilay sosokevitra dia ampiasainao izany.
Azonao atao koa ny manindry teny iray hafa izay efa nosoratana ho an'ny Grammarly hanolotra soso-kevitra mitovy hevitra Ary toy izany koa ianao toa an'i William Shakespeare miaraka amin'ny voambolana mihoatra ny isan-karazany ary ahafahanao manaitra na dia ny mponina sy ny olon-tsy fantatra aza.
Ahoana ny fomba hampiasana ny «Synonyms» amin'ny fitsipi-pitenenana
Ity safidy ity dia azo foanana amin'ny fotoana rehetra raha hitanao fa miteraka fahasosorana bebe kokoa aminao noho ny zavatra hafa rehetra io. Na dia efa voalaza aza, ho an'ireo izay mitady fitaovana hanampiana azy ireo hanatsara ny teny anglisy, dia fampiharana tonga lafatra fotsiny io. Ataovy:
Mandehana any amin'ny fikirana fampiharana ianao.
Mitady ny safidy «Synonyms» ianao ary mampandeha azy.
Hanomboka hanome sosokevitra mitovy hevitra amin'ny teny rehetra soratanao.
Ny antony lehibe Grammarly
Tsy vao teraka i Grammarly, fa efa niaraka taminay vetivety. Tena manangana amin'ny rindrambaiko fitendry natokana hanatsarana ny asa soratanao an'ireo izay mampiasa klavier amin'ny findainy. Mampiavaka azy ny:
Fanamarinana fitsipi-pitenenana maranitra.
Zahao ireo fehezan-teny raha hitady ny lesoka.
Fanitsiana ny mari-piatoana farany.
Fanatsarana ny voambolana.
Tsy mijanona eto fotsiny fa manome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fanitsiana tsirairay izay mihatra Ary noho izany dia azonao kokoa ny toerana nahadisoanao sy ny fahadisoana izay tsy tokony hataonao amin'ny ho avy. Avia, saika mpampianatra izy izay hiandraikitra ny fanatsarana ny teny anglisy anao rehefa mampiasa azy.
Inona tavela amin'ny faniriana isika fa tsy misy ny dikanteniny amin'ny teny espaniola, satria tsy mahasoa antsika ny manitsy azy, na dia mijery ny fomba fanoratantsika amin'ny chat amin'ny WhatsApp aza isika sy ireo fahazarana vaovao, dia handany fotoana amin'ny fanitsiana izany mandra-pahatongantsika hamono azy io.
Na izany aza, eny, mendrika antsika izany ireo mailaka manan-danja ho an'ny asa ary fifandraisana kanto sy matotra kokoa rehefa ilaintsika izany. Hoy aho hoe, raha mianatra teny anglisy ianao, ny Grammarly Keyboard dia fampiharana tsara kokoa hanatsara ny voambolanao ary, manitsy izany, manitsy izay lesoka rehetra anananao amin'ny fitsipi-pitenenana.
Grammarly Keyboard dia misy maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store ka manomboka izao dia manomboka manankarena ny voambolana anglisy ianao ary amin'izany ny ampitso miteny amin'ny teny anglisy dia ho hitanao fa misy fihatsarana amin'ny fivoaranao amin'ny fianarana ny fiteny. Ilaina amin'ny karazana mpianatra rehetra.
Grammarly - Kitendry fitsipi-pitenenana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Amboary ny bokinao anglisy amin'ny Grammarly, rindrambaiko fitendry izay manolotra soso-kevitra mitovy hevitra amin'ny fanoratanao